Kiniiniyada ugu fiican ee ka yar 100 euro - La cusboonaysiiyay Sebtember 2021 | Androidsis
Way cadahay in marka aad iibsanayso kiniinkaaga ugu horeeya ama aad cusboonaysiinayso aaladdii aad ku raaxeysanaysay muddo dheer, qiimaha waa qodob aasaasi ah, Waxaan kudhowaan lahaa inaan dhaho waa sheyga ugu muhiimsan madaama ay noqon doonto miisaaniyadeena taas oo nagu xadidi doonta si aad u yar ama ka yar markaan dooranayno kaniiniga cusub. Si kastaba ha noqotee, kaliya sicirka saameyn kuma yeelan doono xulashadeena, laakiin waxay in badan ku xirnaan doontaa isticmaalka aan siin doonno, haddii aan la wadaageyno kuwa ugu yar guriga iyo, dabcan, dookheena, maxaa yeelay maalinta dhammaadkeeda, shay in aan maalin walba wax ka qaban doonno., waa in ay naga dhigtaa mid aan ku raaxeysano isaga.
Laakiin maanta waxaan ku dejin doonnaa xadka meel cayiman, xadkaasina wuxuu noqon doonaa boqol caqabad oo euro ah. Marka xigta waxaan soo jeedineynaa qaar ka mid ah kiniiniyada ugu fiican wax ka yar 100 euro inaad ka heli karto suuqa maanta. Iyagu dhammaantood ma ahan waxa jira, mana aha inay yihiin dhammaantood, laakiin waxa ugu muhiimsan ee maskaxda lagu hayo waa in, guud ahaan, ay yihiin aalado aad u xaddidan oo, si kastaba ha noqotee, haddii aan ogaanno sida loo doorto oo nasiibku u helo waxoogaa dhinaceena ah, waxay si buuxda ugu adeegi doonaan wakhti macquul ah howlaha ugu caansan: hubinta emaylka, marinka shabakadda oo aan ka maqnayn hal qoraal oo Androidsis ah, daawashada fiidiyowyada, dhageysiga muusikada iyo xitaa ciyaaro ciyaaro aan ahayn aad u casri ah ama u baahan sifooyin sare (oo qaali ah). Kaararka saar miiska, aan aragno qaar ka mid ah kiniiniyadan rakhiis ah.
HOPESUNIN Android Tablet ...
Tablet 8 Inch Android ...
Kiniin 10 inji ...
Kiniin qunyiCO Y7 Android ...
Kiniin 10.1 '' 5G WiFi ...
1 Maxaan ka filan karnaa wax ka yar 100 euro?
1.1 Astaamaha aasaasiga ah
2 5-ta kiniin ee ugufiican wax kayar 100 euro
2.1 Amazon Dabka 7
2.2 Lenovo TAB 3 7 Muhiim
2.3 Nidaamka Tamarta Neo 3
2.4 Wolder MiTab One
Maxaan ka filan karnaa wax ka yar 100 euro?
Kahor intaanan bilaabin inaad ku tusto qaar ka mid ah kiniiniyada ugu fiican wax ka yar 100 euro, aad ayey muhiim u tahay inaad ka jawaabto su'aashan iyo wixii ka sarreeya oo dhan, faham oo ka fikir wax aan horay u soo sheegnay: qiimahan waxaan ku heli karnaa oo keliya qalabka waxqabadka aad u kooban. Haddii tani ay tahay wax wanaagsan ama wax xun, waa arrin ku xirnaan doonta, macquul ahaan, aalad kasta oo gaar ah, laakiin sidoo kale ku xirnaan doonta baahiyaha iyo rajooyinka aan saarnay.
Waxaa taas daliil u ah dadka oo dhami isku baahi ma aha markaan tixgelinayno iibsashada kiniin cusub ama guud ahaan aaladaha kale ee elektarooniga ah. Waxaa jira adeegsadayaal doonaya inay kiniinku bedelaan laptop-kooda, halka kuwa kale ay si fudud u doonayaan shaashad waxyar ka weyn taleefoonkooda si ay u akhriyaan buugaagta ay jecel yihiin markay socdaan oo ay ku dhex wareegaan internetka. Iyagu waa laba nooc oo adeegsadeyaal ah oo aad u kala duwan, labaduba waxay helayaan kiniinkooda ugu habboon laakiin, sida maahmaahdu tiraahdo, "qofna ma siinayo afar pesetas adag", taas oo ah, noocayaga ugu horreeya ee isticmaalayaashu ma sheegan karo inuu isticmaalo kiniin ka yar boqol euro ., Si fudud sababtoo ah faa'iidooyinka kuwan waxay ka dhigayaan rajooyinkaaga kuwo aan macquul ahayn, in kasta oo nooceena labaad ee isticmaalayaashu ay u badan tahay inuu ku qanacsan yahay kharashka kaliya sideetan ama sagaashan euro. Waxaas oo dhami waa kuwo caqli gal ah, laakiin mararka qaarkood way nagu adag tahay inaan xusuusano, markaa ma dhaawaceyso.
Guud ahaan, Dhamaan howlaha aasaasiga ah ee isticmaale kasta waxaa lagu sameyn karaa kiniin ka yar boqol euro, xaaladaha qaarkood oo leh kacdoon ka badan kuwa kale. Cilladaha ugu waaweyn waxaa laga soo qaatay tayada hoose ee qaybaha ay ka kooban tahay taasoo ka dhigaysa guul darrooyinku kuwo soo noqnoqda ku hadla, ku xirmayaasha, shaashadda iyo xitaa batteriga. Duruufaha jira awgood, waxaan ku siin doonnaa xoogaa talo ah oo ah inaad "ku gubto" maskaxdaada: marka aad iibsanayso kaniinigaaga cusub ku tijaabi wax kasta oo aad isku dayday maalmihii ugu horreeyay ee isticmaalka iyo, cilladda ugu yar ee aad hesho, ku celi. Si loo fududeeyo hawshan waxaan kaliya kuu siineynaa xiriiriyeyaal ka socda Amazon, oo ah dukaan internetka ah oo aad xuquuqdaada ku adeegsan karto dhibaato la'aan.
Horumarinta tiknoolajiyada cusub, qiimaha qaybaha ayaa hoos u dhacayay. Tani waxay suurtogal ka dhigeysaa in, khadadka guud, kiniinno ka yar 100 euro ayaa soo bandhigaya xoogaa ka tayo iyo waxqabad fiican marka loo eego kuwii soo shaac baxay dhowr sano ka hor, waxaana rajeynayaa labadaas sano ee hadda ka dambeysa sidoo kale inay hadda ka wanaagsan yihiin. Si kastaba ha noqotee, xulashada iibsadaha ayaa xadidan. Waxaa jira moodooyin badan oo suuqa yaal, laakiin halkan waxaan isku dayeynaa inaan tusno qaar ka mid ah kuwa ugu fiican, tanina waxay xaddideysaa xulashooyinka, horeyba u xaddiday arrimaha sicirka.
Sida astaamaha guud waa inaad ogaataa taas ma heli doontid qaraarada shaashadda waaweyn, laakiin waa inaad had iyo jeer "u toogtaa" dhinaca ugu fiican. Marka laga hadlayo cabirkeeda, kudhowaad 7 ama 8 inji ugu badnaan, inkasta oo aan arki doonno qaar ka reeban.
La kaydinta awoodda sidoo kale runti ayey noqon doontaa xaddidan; Way kugu adag tahay inaad ka hesho 32 GB mid ka mid ah kiniinnada wax ka yar 100 euro, sida caadiga ah waa 8, ugu badnaan, 16 GB. Waa run markasta waxaad ku ballaarin kartaa kaarka xusuusta Si kastaba ha noqotee, si taxaddar leh uga fikir meesha aad ugu baahan tahay codsiyada aad isticmaasho, maadaama ay ku socdaan xusuusta kiniinka.
Marka laga hadlayo nidaamka qalliinka, waa inaad sidoo kale u qaadataa inaad si dhif ah u heli doontid kiniin ka yar 100 yuuro oo leh Android 6 Marsmallow, si kastaba ha noqotee, iyadoo la tixgelinayo isticmaalka marmar iyo aasaasiga ah ee loogu talagalay, waxaa laga yaabaa inaysan ahayn midka ugu muhiimsan.
Marka la eego awoodda iyo waxqabadka, waxaan horey u soo sheegnay tan ka hor: xaaladaha oo dhan waa su'aal moodooyinka ay ku shaqeynayaan xaddidan iyo RAM yar (1GB badanaa) laakiin, waxaan ku adkeysaneynaa, inaan ka fikirno isticmaalka loogu talagalay.
Ugu dambeyntiina, marka laga reebo waxyaabo aad u yar, ha filanin kaamirooyin tayo sare leh sidoo kale.
5-ta kiniin ee ugufiican wax kayar 100 euro
Oo hadda haa! Markaan ka warqabno waxa suuqa yaal, iyo sidoo kale miisaaniyadda aan jeebka ku hayno, aan aragno qaar ka mid ah kiniinnada ugu fiican wax ka yar 100 euro oo aad maanta heli karto.
Amazon Dabka 7
Waxaad u maleyneysaa inaad ka fikirtay markaad aqrinaysid cinwaanka qoraalkan: "Waxaad arki doontaa sida kiniinka Amazon uu igula taliyo." Hadday haa tahay, hambalyo! Maxaa yeelay waxaad gebi ahaanba saxday. Midka cusub Amazon Fire HD Kaliya maahan mid ka mid ah kaniiniyada ugu fiican wax ka yar 100 euro oo aad heli doonto, laakiin sidoo kale Waxay leedahay shaabadda tayada iyo dammaanadda tooska ah ee Amazon, iyo in, marka lacagtu annaga na khusayso, ay tahay mid dhaafsiisan. Haddii aad rabto kiniin raqiis ah oo loogu talagalay shaqooyinka aasaasiga ah iyo shaashad toddobo inji ah ayaa kugu habboon, markaa waan joojin lahaa raadinta oo waxaan doortaa tan Amazon Fire 7 ee aad ku iibsan karto 69,99 with oo leh 8GB oo keyd ah gudaha ama by 79,99 with oo leh 16GB oo keyd ah gudaha Halkan. Intaa waxaa dheer, waxaa jira dalabyo gaar ah oo loogu talagalay dadka isticmaala Ra'iisul-wasaaraha, sidaas darteed weli way ka sii jaban kartaa.
Amazon Fire 7 cusub waxay bixisaa a 7 inch screen oo leh xallinta 1024 x 600 HD iyadoo la ilaalinayo Gorilla Glass inta aan gudaha ku jirno a afar geesle processor at 1.3 GHz oo ay la socdaan 1 GB oo RAM ah iyo 8 ama 16 GB oo keyd ah gudaha ah oo aad ku ballaarin karto kaarka microSD illaa 256 GB.
Guud ahaan, waxay bixisaa waxqabad wanaagsan, illaa iyo inta aynaan isku deyin codsiyo aad u culus, oo ay leedahay baytariga bixiya xoogaa 8 saacadaha ismaamulka, taas oo aan haba yaraatee wax xun ahayn. Marka laga hadlayo kaamirooyinka, aad bay u xaddidan yihiin: 2 MP midka ugu weyn iyo VGA kan hore.
Maaddaama nidaamka qalliinka la isku daro Dabka OS 5 in, in kasta oo aysan siinaynin gelitaanka Google PLay Store, barnaamijkiisa iyo dukaankeeda ciyaarta waxaad ka heli doontaa ku dhowaad wax kasta oo aad u baahan tahay.
Lenovo TAB 3 7 Muhiim
Lenovo had iyo jeer waa nooc aad ku kalsoonaan karto, caddayntuna waa tan Lenovo TAB 3 7 Muhiim, mid ka mid ah kaniiniyada ugu fiican wax ka yar 100 euro oo aad hadda heli karto.
Waxay bixisaa shaashad 7 inch 1024 x 600 Pixel ah oo leh Mediatek MT8127 1,3 GHz processor oo ay weheliso 1 GB RAM iyo 16 GB oo kaydinta Gudaha aad ku ballaarin karto kaarka micro SD-ka illaa 64 GB oo dheeri ah. Maaddaama ay tahay nidaam hawlgal ka shaqeeya Android 5 iyo xagga is-maamul, hal lacag ayaa bixisa ilaa 10 saacadood oo adeegsi ah.
Sidoo kale waxaad kuheli kartaa 8 GB, hase yeeshe, tani waa awood aad u xadidan sidaa darteed, markasta oo aad awoodid, dooro 16 GB iyo wixii kabadan.
Nidaamka Tamarta Neo 3
Mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ayaa ah tan Nidaamka Tamarta Neo 3 taasi waxay la imaaneysaa a 7 inch shaashadda IPS oo leh xallinta 1024 x 600 pixel, 1,3 GHz processor afar geesle ah, Mali-400 GPU, 1 GB RAM, 8 GB oo kaydinta la ballaarin karo gudaha illaa 128 GB lagu daro, 5 MP kaamirada weyn iyo 2 MP camera hore (labadaba leh flash), Android 5.1 nidaamka qalliinka iyo batteriga bixiya a is-maamul 4 saacadood ah (laga yaabee inay tani tahay meesha ugu daciifsan). Sida qiime dheeraad ah, waxay la timaaddaa caymiska jebinta shaashadda bilaashka ah inaad ku maamuli karto websaydhka Tamarta Sistem.
Qiimuhu waa qiyaastii € 78, oo ku dhow boqol euro waxaad sidoo kale iibsan kartaa qaabka Lite, oo leh astaamo aad isugu eg laakiin shaashad 10,1-inji ah.
Ikhtiyaar kale oo xiiso leh ayaa ah tan Wolder MiTab One, kiniin aad u anfacaya oo raqiis ah oo leh shaashad 7 inches iyo xallinta HD ee 1024 x 600, 2 GHz Intel Core 1.3 processor, 1 GB oo RAM ah, 8 GB oo kaydinta gudaha, Android 5.0 iyo qiimaha kaliya € 54,90 qiyaastii.
Ojito! Sababtoo ah dhamaadka waxaan uga tagnay tan Huawei Mediapad T3 taasi ayaa la socota Android 6.0 Marshmallow hoosta lakabka u-habeynta EMUI 4.1 Lite muuqaal kan kiniinnada ka yar 100 euro. Intaa waxaa dheer, waa Huawei, mid ka mid ah noocyada ugu fiican uguna muhiimsan ee Shiinaha. Qiimuhu wuxuu ku dhow yahay boqol euro laakiin bedelkeeda waxay bixisaa faa'iidooyin ka fiican kuwa moodooyinka kale, marka lagu daro nidaamka hawlgalka. Astaamaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah a 7 inch HD IPS shaashad 1024 x 600, 1.3 GHz processor afar geesle ah oo ay weheliyaan 1 GB RAM iyo 8 GB oo kaydinta la ballaadhin karo iyo 3100 mAh baytariga. Kaamirooyinkeeda wali way xadidan yihiin laakiin wali way ka fiican yihiin kiisas kale oo badan: 2 Mp camera gadaal iyo 2 Mp kaamerada hore.
Shaki la'aan, waxaan wajaheynaa mid ka mid ah kaniiniyada Shiinaha ugu fiican qiimaheeda lacag.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Kiniiniyada Android » Kiniiniyada ugu fiican ee kayar 100 euro
Fariintii ugu horreysay ee Nomu S30 Mini [fiidiyow]